Tọghata Nigerian naira Ka US dollar
UN mgbanwe udu data na 11/04/2021 08:36
Nigerian naira Ka US dollar ntụgharị. Nigerian naira ego na US dollar taa na ahia ahia ego.
1 000 Nigerian naira = 2.62 US dollar
Mgbanwe mgbanwe ọnụego nke Nigerian naira ka US dollar pụtara otu ugboro kwa ụbọchị. A na-eme arụmọrụ mgbanwe ego niile n'ụlọ akụ. Ozi na ọnụego mgbanwe bụ akwụkwọ. 1 Nigerian naira bụ 0.002625 US dollar. 1 Nigerian naira emefuola ego karịa site na 0 US dollar. Ego nke 1 Nigerian naira ugbu a na 0.002625 US dollar.
Ọnụego mgbanwe Nigerian naira Ka US dollar
Ọnwa atọ gara aga, enwere ike rere Nigerian naira maka 0.002535 US dollar. Otu afọ gara aga, enwere ike ịzụta Nigerian naira maka 0.002631 US dollar. Afọ iri gara aga, enwere ike rere Nigerian naira maka 0.002631 0 US dollar. Nke a ka egosiputara eserese nke mgbanwe ego maka oge di iche. 7.05% - mgbanwe na ọnụego mgbanwe nke Nigerian naira ka US dollar kwa izu. N'ime afọ, Nigerian naira ka US dollar gbanwero ọnụego mgbanwe site na -0.25%.
Converter ego Nigerian naira US dollar
Nigerian naira (NGN) Ka US dollar (USD)
1 000 Nigerian naira 2.62 US dollar
5 000 Nigerian naira 13.12 US dollar
10 000 Nigerian naira 26.25 US dollar
25 000 Nigerian naira 65.62 US dollar
50 000 Nigerian naira 131.23 US dollar
100 000 Nigerian naira 262.47 US dollar
250 000 Nigerian naira 656.17 US dollar
500 000 Nigerian naira 1 312.34 US dollar
Taa, enwere ike ịzụta 10 Nigerian naira maka 0.026247 US dollar. Ihe ntụgharị ego na-enyezi 0.065617 US dollar maka 25 Nigerian naira. Ọ bụrụ na ị nwere 50 Nigerian naira, mgbe ahụ na British Virgin Islands ị nwere ike ịzụta 0.13 US dollar. Taa, enwere ike ịzụta 100 Nigerian naira maka 0.26 US dollar. You nwere ike ree 250 Nigerian naira maka 0.66 US dollar . Taa 500 NGN = 1.31 USD.
Nigerian naira Ka US dollar Ọnụego mgbanwe
Nigerian naira Ka US dollar taa na 11 April 2021
11.04.2021 0.002633 0.000177 ↑
10.04.2021 0.002456 3.56 * 10-6 ↑
09.04.2021 0.002453 2.98 * 10-5 ↑
08.04.2021 0.002423 -5.48 * 10-5 ↓
07.04.2021 0.002478 2.49 * 10-5 ↑
Taa na 11 April 2021, 1 Nigerian naira = 0.002633 US dollar. 10 April 2021, 1 Nigerian naira = 0.002456 US dollar. 9 April 2021, 1 Nigerian naira akwụ 0.002453 US dollar. Oke NGN / USD ọnụego maka ọnwa gara aga dị na 11.04.2021. Nigerian naira ka US dollar na 7 April 2021 dokwara na 0.002478 US dollar.
Nigerian naira Ka US dollar ọnụego mgbanwe n'akụkọ ihe mere eme
Nigerian naira na US dollar akara ego na mba